Kedu otu esi eme ka ngwaahịa Amazon gị dị irè?
Amazon bụ ihe kasị elu e-azụmahịa n'elu ikpo okwu n'ụwa. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ndị ọzọ search engines, na-enye ndị ọrụ na ngwaahịa bara uru na ajụjụ ha. Ọ dị ịrịba ama na ị na-eche banyere njikarịcha na otu ụdị omume kachasị mma kachasị gbanwere kwa afọ. Dịka ihe ọ bụla ọzọ na-ewu ewu engines, Amazon nwere iwu nke ya na nduzi ịkwesiri ịgbaso iji hụ na ndị ahịa gị - live chat with computer experts free. Ọ bụ ahịa ahịa nke na-asọ asọmpi nke ga-eme ka ndị ndu gị niche mara ya; ịkwesịrị itinye ego na njirimara njirimara ngwaahịa Amazon gị.
Ọ bụrụ na ọ dịtụghị mgbe ị na-echegbu onwe gị maka ịchọtacha ngwaahịa gị maka Amazon, ị gaghị aga ebe dị anya, ma ugbu a ọ bụ oge dị ukwuu ịmalite ịmepụta atụmatụ. Ejiri isiokwu a iji gosi gị otu esi eme ka ngwaahịa Amazon gị bụrụ nke gbanwere nke ọma ma mee ka ndị ahịa ndị ọzọ nweta ọchụchọ.
Usoro bara uru iji meziwanye ngwaahịa Amazon gị
Ihe oyiyi ngwaahịa
Iji mee ndepụta gị bara uru, ịkwesịrị inye ndị ọrụ ihe oyiyi kachasị mma. Nanị otu ụzọ ndị ahịa gị nwere ike isi nyochaa ngwaahịa ha na-aga ịzụta bụ foto ndị dị na ngwaahịa dị iche iche. Amazon nwere ya ngwaahịa oyiyi chọrọ na-agụnye teknụzụ nkọwa na Amazon saịtị ụkpụrụ maka ngwaahịa oyiyi. Ihe oyiyi oyiyi dị mkpa chọrọ ikwu na onyinyo ahụ kwesiri ịdị na-elekwasị anya, ma ọ bụ na-ese foto ma ọ bụ na-ese foto, na-acha ezigbo agba ma dị mma. Ọzọkwa, ị ga-achọ ijide n'aka na ngwaahịa jupụtara 85% ma ọ bụ karịa nke onyinyo ahụ.
Ihe oyiyi ị na-enye maka ndepụta ngwaahịa na-abụkarị ihe na-eme ma ọ bụ nkwụsịtụ ihe kachasị ndị nchọpụta Amazon. Ọ bụ ya mere ị ga-eji mee ka ha sie ike ịrata ndị ahịa Amazon ka ha zụta ngwaahịa gị.
Mee ka aha ngwaahịa gị
Ị ga-etinye ihe niile dị mkpa na ederede 200 nke aha gị. nkọwa zuru ezu nke ngwaahịa na-agụnye agba nke ihe ahụ, ibu ya, nha, na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
Dịka ntụziaka Amazon si dị, ị ga-agbaso usoro pụrụ iche iji nyere gị aka ịmepụta utu aha gị. Ụdị a yiri - "ụdị + nọmba nlereanya + aha nlereanya + ngwaahịa Ụdị na agba.
Nwee ike gị site na nkọwa na isi ihe
na ngwaahịa, ị nwere ike ịhụ ihe mgbochi n'okpuru aha. N'ebe a, ị nwere ike ịkọwa ihe dị na ya n'oge na-adịghị anya ederede ma jiri ya mee ihe iji mee ihe ederede. Ị pụghị ịzọzọ nzọụkwụ a dịka ọ na-enyere ndị ọrụ aka ịme mkpebi ịzụ ha.
Otú ọ dị, ọ dịkwa mkpa iji tinye nkọwa zuru ezu nke ngwaahịa gị. Mgbe ụfọdụ, ndị na-ere ahịa n'Ịntanet nwere mgbagwoju anya banyere nkọwa ahụ ma chefuo ịgbakwunye ya kpamkpam. N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe nkedo apụghị ịza ajụjụ nile nke onye ọrụ na ngwaahịa ndị ị na-ere. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kọwaa ya n'ụzọ zuru ezu, nye ndị ahịa gị nwere ike iji ngwaahịa na atụmatụ ngwaahịa niile. I kwesịghị ide ebe a banyere ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ tinye ụfọdụ ozi nkwado. Ọrụ mbụ gị bụ iji gosipụta ihe ị na-ere ahịa.